ဝင်ရိုးစုံကမ္ဘာစီးပွားရေးနှင့် စူပါ ပါဝါတို့၏ မဟာတူရူချက်များ ~ Myo Chit Myanmar
ဝင်ရိုးစုံကမ္ဘာစီးပွားရေးနှင့် စူပါ ပါဝါတို့၏ မဟာတူရူချက်များ
ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းဝင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းကြီးအဖြစ် အာရှကို သတ်မှတ် ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိလာသည်မှာ ၂၁ ရာစု၏ အခင်းအကျင်းသစ်ဖြစ်သည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်က ကမ္ဘာလူဦးရေနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ ထက်ဝက်ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သော အာရှမှာ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိတော့သည်။ ယင်းမှာ အာရှတွင် တစုံတရာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စက်မှုတော်လှန်ရေးက ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကကို ကမ္ဘာ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပင်မဒေသကြီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အာရှ၏နိုးထမှုမှာ ဂျပန်ဖြင့်တာထွက်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုးရီးယားသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ အရှေ့တောင်အာရှသို့ပါ ကူးပြောင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှားတို့ စတင်ဖွံ့ဖြိုး လာခဲ့သည်။ ယခုတဖန်စီးပွားရေးစန်းပွင့်မှုမှာ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ဆီသို့ ဦးလှည့်လာပြီး ဤဖြစ်စဉ်အတွင်း သန်းရာပေါင်းများစွာသော လူများမှာ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်။
ဆိုခဲ့ပါ အပြောင်းအလဲက နိုင်ငံများအကြား အင်အားချိန်ခွင်လျှာ အလှည့်အပြောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုပါ ဖန်တီးလိုက်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်ကဂျပန်ကို ဖြတ်တက်ကာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး၏ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးနေရာကို လွှဲပြောင်းယူလိုက်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် ဂိုး(လ်)(ဒ်)မဲ(န်)ဆက်(ခ်ျ)(စ်)ကမူ ၂၀၂၇ တွင် တရုတ်စီးပွားရေးမှာ အမေရိကကိုပါ ကျော်တက်မည်ဟု ခန့်မှန်းလိုက်သည်။
၂၀၂၅ တွင် ဘရာဇီးလ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တောင်ကိုးရီးယားနှင့် ရုရှား စသည့် စီးပွားရေးအင်အားသစ် (၆) နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းစီးပွားရေးပမာဏမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ ထက်ဝက်မျှ ရှိလာမည်ဟု ပညာရှင်အချို့က မှန်းဆကြသည်။ ပြည်တွင်းပေါ်လစီများကို တိုးတက်စေပြီး၊ ပြည်ပတွင် ဖွံဖြိုးမှုအခွင့်အလမ်း များကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် ပြည်ပရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတို့တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။ အလွန်ကြီးမားသော ပြည်တွင်းငွေပင်ငွေရင်းများက အရှိန်ကောင်းနေသော စီးပွားရေးကို မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ကီးပလေယာများ ဖြစ်လာမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ကြသည်။ ထိုမျှမက နိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်တွင် ငွေကြေးတစ်ခုတည်းက လွှမ်းမိုးထားသည့်ပုံစံလည်း အဆုံးသတ် သွားဖွယ်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများအတွက်မူ ယင်းခန့်မှန်းချက်များမှာ သိပ်အရေးမပါတော့ဟုသာ ဆိုရမလို ရှိသည်။ ဂလိုဘယ်လ်စီးပွားရေး၏ ဒုတိယစူပါပါဝါဖြစ်လာသော တရုတ်ပြည်အနေဖြင့် တကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပြူတာ၊ ကားနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတို့တွင် ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
သုတေသနအဖွဲ့အစည်း အိုင်ဒီစီ(IDC) ၏ အဆိုအရ လာမည့်နှစ်တွင်ပင် တရုတ်ပြည်သည် အမေရိကကို နောက်ကောက်ချကာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပီစီဈေးကွက်ဖြစ်လာမည်ဟု သိရသည်။ ကားထုတ်လုပ်မှုတွင် တရုတ်သည် ယမန်နှစ်ကပင် အမေရိကကို နန်းချကာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကားဈေးကွက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျီအမ်(မ်)(General Motor) ကားကုမ္ပဏီကြီး၏ (၁၀၂)နှစ်ကြာ သမိုင်းတွင် ပြည်တွင်းမှာထက် တရုတ်ပြည် ဈေးကွက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကားအရေအတွက် ပိုမိုရောင်းချခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျီဒီပီကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်လျှင် တရုတ်၏စီးပွားရေးအင်အားမှာ ယခုနှစ် ဂျီဒီပီ ပမာဏ ယူအက်(စ်) (၆.၅)ထရီလျံဒေါ်လာ ရှိရာမှ လာမည့်ငါးနှစ်တာကာလ (၂၀၁၆)တွင် ယခုထက် နှစ်ဆခန့်(၁၁.၂)ထရီလျံသို့ ရောက်လာဖွယ်ရှိရာ အမေရိကထက် လျော့နည်းနေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တရုတ် စီးပွားရေးမှာ အမေရိကနှင့် ဂျီဒီပီအရ တူညီသည့် အနေအထားသို့ ရောက်လာခဲ့လျှင်ပင် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် မတူညီမှုများ ရှိနေဦးမည်သာဖြစ်သည်။
ယင်းအချိန်၌ တရုတ်ပြည်တွင် ဖွံဖြိုးမှုနိမ့်ကျသော ဒေသကြီးများ ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်၏ ဂျီဒီပီ တိုးတက်မှုနှုန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ယူအက်(စ်)အနေဖြင့် ၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိလျှင်ပင် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွင် ၂၁ ရာစု၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်အထိ အမေရိကကို လိုက်မီဦးမည်မဟုတ်ပေ။
စီးပွားရေးနိုင်ငံသစ်များသည် စန်းပွင့်မှု၏ကနဦးကာလအတွင်း နည်းပညာတင်သွင်းမှုမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိကြသည်။ သို့သော် ဖွံ့ဖြိုးမှုရေချိန် မြင့်တက်လာချိန်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း နှေးကွေး သွားလေ့ရှိသည်။ တရုတ်စီးပွားရေးမှာ နိုင်ငံပိုင်အင်တာပရိုက်စ်များ မလုံလောက်မှု၊ ကြီးထွားလာသောလူတန်းစား မညီမျှမှု၊ နိုင်ငံအတွင်း လူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်မှု၊ လူမှုလုံခြုံရေးကွန်ယက် အားနည်းမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု၊ အင်စတီကျူးရှင်းများ ချို့တဲ့မှု စသည့် အကြောင်းများကြောင့် လျင်မြန်သော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကိုတာရှည်ခံအောင် ထိန်ထားရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ကြီးမားသည့်အဆီးအတားများ ကြုံရကိန်းရှိသကဲ့သို့ ယင်းအကြောင်းများက နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုလည်း ဖန်တီးလာနိုင်သည်။ တရုတ်ပြည်သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကြားတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေတိုးပွားမှုနှုန်း အမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၃၀ အရောက်တွင် မှီခိုသက်ကြီးရွယ်အို အရေအတွက်မှာ ကလေးဦးရေထက် ပိုများဖွယ်ရှိသည်။ နိုင်ငံမကြွယ်ဝမီ အိုမင်းတွင်းဆုံး ဖြစ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြလျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှု အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် နဝမနေရာ၌ရှိသော တရုတ်ပြည်သည် နံပါတ်တစ်နေရာမှ ဂျာမနီကိုဖယ်ရှားကာ ထိပ်ဆုံးသို့တက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာချိန်ညှိမှုများတွင် အငြင်းပွားမှုများ တိုးမြင့်လာသည်ဖြစ်ရာ တရုတ်၏ ပို့ကုန်အားပြုသော ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံမှာ ထိန်းညှိရန်လိုအပ်လာသည်။ တကယ်တမ်းတွင် တရုတ်၏ (၁၂) ခုမြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းမှာ ပို့ကုန်အပေါ်အားပြုမှုကို လျှော့ချရေးနှင့် ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားတိုးမြင့်ရေးကို ဦးတည် ထားသည်ဖြစ်ရာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် မသေချာသေးပေ။
တရုတ်၏ အာဏာရှင်ဆန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ အောင်မြင်သောအိုလံပစ်ပွဲတော်၊ မြန်နှုန်းမြင့် ရထားစီမံကိန်းများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးအကြပ်အတည်းမှ စီးပွားရေပြန်လည်နာလန်ထူလာမှု စသည့် အောင်မြင်မှုများကြောင့် ယခုအချိန်အထိ စင်ပေါ်ရောက်နေဆဲဖြစ်သည့်တိုင် ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကို ရေရှည်ထိန်ထားနိုင်ရေးမှာ ပြင်ပကလေ့လာသူများအတွက်သာမက တရုတ်ခေါင်းဆောင်များအတွက်ပါ ပဟေဠိတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ တရုတ်နိုင်ငံရေးအနာဂတ်က စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှု ရှိမည်ဟူသောအချက်မှာ တရုတ်များအပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မမှန်းဆနိုင်သည့်အချက် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်အတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပေါ် သဘောထားတင်းမာသော နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ထားရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယားတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးထိခိုက်ခဲ့ရသည်။ ရလဒ် အနေဖြင့် အာရှ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များမှ ယူအက်(စ်)ကိုဖယ်ရှားပစ်ရေးမှာ တရုတ်အတွက် ပိုမိုခက်ခဲ စေမည် ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် ယူအက်စ်ဒေါ်လာမှာ အရေးပါဆုံး နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည့်တိုင် ဤလွှမ်မိုးမှုမှာ ကျဆင်းလာပြီဟုဆိုနိုင်သည်။ ယူရိုငွေမှာ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ၏ အင်အားအကြီးဆုံးပြိုင်ဖက် ဖြစ်သည်။ ရေရှည်တွင်မူ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးများသည်လည်း ယခုထက်ပို၍ အရေးပါလာမည်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိပေ။
တရုတ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အရွယ်အစားမှာ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ယူအက်စ်နှင့် အပြိုင် ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာသလောက်နီးပါရှိသည်။ ပါဝါအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တရုတ်အနေဖြင့် ယူအက်စ်၏ အနီးကပ်ပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲပေ။ သို့စေကာမူ တရုတ်သည် အမေရိကကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာမည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။
တရုတ်အနေဖြင့် ကြီးမားသောပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို မကြုံတွေ့လျှင်ပင် ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားသည့် လက်ရှိစီမံကိန်းများမှာ တစ်ဖက်မြင်ဆန်လွန်းသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ တရုတ်သည် အမေရိက၏စစ်ရေးနှင့် အာရှဒေသတွင်း ပါဝါထိန်းညှိမှုတွင် ၎င်း၏ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များ စသည်တို့ကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းက တစ်ဖက်မြင်ဆန်မှု(ဝါ) အမြင်ကျဉ်းမှုကို ပြညွှန်နေသည်။ ဤအခင်းအကျင်းများအပေါ် ကောက်ချက်ဆွဲရလျှင် တရုတ်ပြည်သည် ယူအက်စ်နှင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး၊ ငွေကြေးနယ်ပယ်တို့တွင် အပြိုင်ဖြစ်လာနိုင်သည့်တိုင် ယခုရာစုနှစ်၏ ပထမတစ်ဝက်တွင် အလုံးစုံကျော်တက်ကာ အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖွယ်မရှိပေ။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ယူအက်စ်နှင့် တရုတ်တို့အနေဖြင့် တစ်ဦးစီ၏ အင်အား၊ ရည်မှန်းချက် စသည်တို့အပေါ် အကြောက်လွန်မှုများအား ပိုမိုချဲ့ကားခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရန် မျှော်လင့်ခြင်းမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းတွင် အမေရိကနှင့် တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားတွင် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသော ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်သည့် အကြောင်းများ မရှိပေ။ နှစ်နိုင်ငံလက်ချင်းချိတ်ကာ အခြားသောနိုင်ငံများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးတရား များစွာ ဖြစ်ထွန်းလာမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
Ref: Are We Prepared foraMultipolar World Economy - by Justin Yifu Lin, Mansoor Dailami
Will China Surpass the US in 2016? – by Tan Siok Choo, 30.05.2011, The Sun Daily
Is China Overtaking America? – by Joseph S. Nye, Jr., Project Syndicate
Posted in: Article,Economic Article,Literature